60 Mfe 4th nke Ntụziaka July na Atụmatụ NchNhr - Nri
60 4thtọ 4thtọ 4th nke July iji mee maka Epic Summer Cookout
60 Delicious 4th July Recipes Make
Nke anọ nke July na-achọ ihe ụtọ esi nri , ọbara ọbara-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ desserts na oyi mmanya n'aka. Ma echegbula, n'ihi na anyị nwere niile Ezi ntụziaka ị chọrọ itu a ọnụ mmiri Independbọchị Mwere Onwe ọzọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị gị na ụmụaka nke afọ a. Site na nri gboo-American efere, dị ka coleslaw na Ndị ohi , na echiche ndị ọzọ na-echepụta, dị ka kọlịflawa ' nduku 'salad na grilled anyụ skewers, anyị achịkọtala ndị kachasị mma nabata , n'akụkụ na desserts ịpịa ya tupu ọkụ ọkụ ahụ amalite. N’ebe a, ihe iri isii nke kacha mma dị na mkpụrụ ụbọchị anọ nke ọnwa July — n’ihi na, emesịa, ọ bụghị ezumike ọ bụla bụ naanị ihe ngọpụ iji rie nri gabiga ókè?
Njikọ: 50 4th nke July Appetizers maka Ememme Oge Ikpeazụ nke Ezumike
1. Caprese Salad na Grilled Zucchini
Nri nke na-agbapụta na ekpomeekpo oge okpomọkụ (ọ naghị ele ya anya, ma). Buru zukini n'ahịa ndị ọrụ ugbo ka ose a Tomato kpochapụwo.
Nke a Anụ Mmịkpọ akụkụ na-agwakọta niile crunchy, savory, creamy Efrata nke kpochapụwo Sanwichi - mwepu achịcha.
Gbasara : 13 Picnic-Perfect Pasta Salad Recipes
3. Ube oyibo Nduku Salad
Sayonara, mayo. Anyị na-eji yogọt Greek eme nri n'akụkụ a nnukwu creamy na tangy. Gafere ọgịrịga , Biko.
4. Achịcha Osisi-Feta Skewers Grịl
.Tọ anyụ na tangy feta cheese bu tomato ohuru na mozzarella. Kama ị na-egbutu ihe ndị ahụ ma tụfuo ha na mgbakwasa, ndị a skewers na-ezukọta na grill ma mee ka njide zuru oke ndaeyo ndaeyo .
5. Obere Strawberry Ice-Cream Pies
Crumbly graham cracker jikọrọ ọnụ, ọkụ roara n'ọkụ strawberries , oyi na-atụ nke vanilla ice ude . Ree ma? Ọ dị mma. Wụsaa na mkpụrụ osisi bluuberi maka ịhụnaanya n'anya n'anya.
6. Salami, Artichoke na Ricotta Pasta Salad
Ole na ole kpochapụwo .Talian flavors na-agbakọta maka otu salad pasta dị mfe ma na-enye afọ ojuju. Anyị ga-agbakwunye atịchok biko, biko.
7. Greek Turkey Burgers na Tzatziki Sauce
Ihe a na-eme ka ekpomeekpo a na-eto ngwa ngwa na-ebili dị ka burger kachasị amasị anyị n'oge niile. Ọ dị nfe karịa na-atọ ụtọ karịa anụ ehi na-eme achịcha ọdịnala, yabụ ọ bụ isi nri zuru oke na-ekpo ọkụ-ihu igwe. Rie ya salad, ibe, fries… ma obu ato.
8. acha uhie uhie, White na Blue Sangria
Brandy na egbuke mmanya na-acha ọcha mee nke anọ nke ọnwa Julaị mmanya mmeri dị mfe. Ndụmọdụ: Maka ihe ịchọ mma, jiri kuki kuki ka ịpịa mpekere apụl n'ime kpakpando.
9. Okporo Cornzọ Ọkụ dị na Mexico
Otutu ogbe, jidere akpa nke achịcha tortilla ma kpọọ ụfọdụ ndị enyi. (Ọ bụghị na ị ga-achọ enyemaka dị ukwuu maka ihicha efere ahụ.)
10. Ọkụkọ eghere eghe
Only na-eche naanị * ọkụkọ ọkụkọ na-agwụ ike. Ozugbo ị nụrụ ụtọ ndị a gbara chara acha na ọka ọhụrụ na bekee, ị gaghị ekwenye na ha esiri ya kpamkpam.
11. Berry, Feta na akwụkwọ nri inine
Oge ezumike okpomọkụ nke kachasị mma anyị hụtụrụla. Akụkụ anyị kachasị amasị anyị bụ ihe na-atọ ụtọ, nke creamy strawberry-poppy.
12. Berry-Coconut Rocket Pops
Igwe a na-agba agba, nke ejiri mkpụrụ osisi na mmiri ara ehi aki oyibo, mee ihe ụmụaka na ndị toro eto ga-ahụ n'anya. N'agbanyeghi na o nweghi ihe eji eme ya, o na ato uto.
Njikọ: 42 Summer Ice Pop Recipes Ndị Dị Mfe Ime na Homelọ
13. Kukumba, Basil na Salam anyụ
Ndewoooo, ume ọhụrụ. ’Re ga-ada ada maka akwa zingy soy- ginger mgbakwasa na galik, wayo na serrano ose.
14. Ìhè na Tangy Coleslaw
Akụkụ okpomọkụ a na-ezukọ na ọkụ wee nwee ike iru elekere anọ tupu oge eruo. Jiri ya salmon jee ozi ya ezi anụ ezi .
15. Eburu Mac-na-Chiiz ata aru
N’ihe na-erughị otu awa, ị nwere ike ịnwe 48 nke obere obere obere ọmarịcha nri a n’elu tebụl, jiri ụdị chiey gooey cheddar abụọ dị mma.
16. Akpịrị Azụ Azụ na Balsamic-Peach BBQ Sauce
Lee, ihe kachasị anụ oriri na ọ barụ mainụ isi. Bee ụmụ ọhụrụ a jeere ha ozi. (’Re ga-achọ akwa nhicha maka nke a.)
17. Kọlịflawa ‘Nduku’ Salad
Chefuo mayo na stachi nile. Họrọ nhọrọ a na-acha ọkụ ọkụ na salad nduku kpochapụwo, ejiri yogọt Greek na ọkacha mmasị anyị cruciferous veggie kama.
18. Greek Watermelon Feta Salad na Basil Vinaigrette
,Tọ, savory na-enye ume ọhụrụ. Tụlee nke a gị ukara salad nke okpomọkụ.
19. Ube oyibo gbaara akwa
I chekwara Ista bụ nanị oge ezumike nke chọrọ akwa. A creamy ata aru dabara n'ebe nile. Kwe ka umuaka nyere aka na nke a.
20. Chilatị Kukumba Salad
Efere dị mma ma na-enye ume ọhụrụ ịgbakwunye na nke anọ nke ọnwa July. Ihe ị ga - eme bụ belata ụfọdụ cukes, tinye ha oge ma hapụ ha ka ha friji ntakịrị. Easy peasy.
21. Otu-Efrata Watermelon Sorbet
N'oge ọkọchị, anyị na-anwa jụụ dị ka o kwere mee. Dika odi, ihe uto a dabara na oge anyi, ebe obu na o nweghi ihe obula ma obu okpukpu abuo.
22. Osi Aioli Ghere eghe oka
Kama ị na-esi ọka ọka na-ata ya wee jiri butter na nnu mee ya, nye ụmụ okorobịa ahụ ekpomeekpo ekpomeekpo site na ịpịpụrụ ha ihe na-acha anwụrụ ọkụ.
23. Nri-nwayọ-Ejiri ezi Ezi
Anyị nwere olile anya na ị hapụghị onye na-esiri gị nri ngwa ngwa maka oge ọkọchị. Mee ka ọkpụkpọ ite gị rụọ ọrụ ahụ, wee kpoo ụmụ okorobịa a elu na tangy coleslaw.
Oh ụtọ Basil
24. 8-Layer Hummus Dip
Bido mmemme gị site na igwe mmadụ nke na-atọ ụtọ nke jupụtara na mkpụrụ pine, pesto, ose na-atọ ụtọ, kukumba, tomato , cilantro na chiiz feta.
Ntụziaka Tin na-eri
25. Greek Lemọn Orzo Salad
Ọ dị ọhụrụ. Ya mere Greek. Were ya n'onwe ya ma ọ bụ n'akụkụ nri protein kachasị amasị gị. (Nwere ike anyị na-atụ aro grilled lemon chicken skewers na tzatziki?)
26. Ogwu na-acha uhie uhie
Anyị na-akwado bọọlụ ahụ site na ihe ọhụrụ, gbanye ha na pan ma tinye ogbe ahụ na ntanetị.
Ezi na ebi nri
27. Pink Arinkụ Popsicles
Site n'ike mmụọ nsọ kachasị Insta, ị nwere ike ịtụ ahịa na Starbucks. Enwere ike ịkwalite pop ndị a na chocolate ọcha, aki oyibo flakes ma ọ bụ strawberries.
28. Kọlịflawa ‘Tater’ All
Mgbe ịchọrọ ezumike site na poteto ndị ahụ niile, họrọ maka cuties ndị a dị mma, na-enye afọ ojuju ma zuru oke maka ịkụnye.
ịkpụ ntutu maka ọkara ntutu ntutu ihu oval
29. Sandali Sandali nke Deli Pinwheel
Ọ bụghị nkezi gị Sanwichi . (Daashi ego maka ijere ha ozi na pepperoncini na prosecco .)
30. Mkpụrụ osisi Crumble Crumble
Onye America niile dezaati Ntụziaka, naanị kama nke ọdịnala ọdịnala, anyị na-eji ihe dị ka streusel-topping ka ose ihe.
31. Akwụkwọ nri French nri achicha
Party mikpuo , edochila gi. Weta na Parmesan, mozz, cheddar dị nkọ na cheese cream.
32. Shrimp Ogba Skewers na Oka, Soseji na Poteto
Anyị hụrụ nri nri adịghị ala n'anya. Naanị gbapụta ndị a skewers na grill, dina ụfọdụ akwụkwọ akụkọ na tebụl picnic ma mee ka ndị ọbịa gị gwuo.
33. Ihe Ntinye Cuban
Achịcha mara mma nke ham-na-cheese adịghị mfe ịkwadebe maka ìgwè mmadụ. Mee ka umuaka gi nyere gi aka izukọta nri a na-atọ ụtọ, wee kpoo ha n’ọkụ tupu ha ejee ozi.
34. Egbe Buffalo Chara N’ọkụ okuko
Anyị nwere ihe nzuzo: A na-eme nku ndị a site na mbido ruo n'isi, yabụ na ọ dịghị otu ntụ mmanụ dị ọkụ dị mkpa. Ghara ikwu, ha na-zuo okè. Gafere ebe ana-azu umuanu.
Foto: Jon Cospito / ygha: Heath Goldman
35. Rainbow Heirloom Tomato Bruschetta
Kedu ihe kpatara ị ga - eji belata ezumike, ọcha na acha anụnụ anụnụ n’oge ezumike a? Ndị a agba ga-enwerịrị obi ụtọ maka igwe mmadụ ọ bụla.
36. Grịlị flank egweri na Lemọn-Herb Sauce
N'ihi na nnukwu, obi ike ekpomeekpo, anyị marinate anyị ibe anụ tupu ọ banye na imi ihe, werezie nri ahịhịa ọhụrụ dị ọhụrụ maka mmụba dị elu. Ma chee echiche banyere oge ịmịkọta mmiri ahụ dịka oge ịtaụ mmanya ọ forụ forụ maka osi nri.
Ọdịmma nke Oge A
37. Ọkụkọ Chicken Quesadillas
Mgbe anyị chere maka nri nkasi obi, uche anyị na-agakwuru ndị a. Ha na-ekpo ọkụ, na-ada mba ma na-eme ya.
38. The Ultimate Party Sub
Uwe eji eji ejiji, nnukwu sanwichi buru ibu kachasị mfe iji zụọ igwe mmadụ agụụ. Yabụ maka nzukọ gị nke anọ nke ọnwa Julaị, jiri obere akụkụ rụọ obere ọrụ. nduku salad , Mkpụrụ osisi veggie na pịkụl kwesịrị ime ihe aghụghọ) na ị ga-ahụrịrị ịmalite ịme mmemme ahụ.
39. Salmon Burgers
Chọrọ ịgbakwunye ntakịrị ọkaibe na igwe nri gị n'oge ọkọchị? Gbalịa ihe ndị a dị nro, nke mara mma nke na-agaghị ada gị mmụọ ehi .
40. Ọkara Charred na Rosemary Grịlị Pizza
Oge uto nke okpomoku obula. Iri ọka ahụ na-enye achịcha ahụ dum anwụrụ ọkụ ị ga-ahụ n'anya. Enwere ike ịkwado ya n'ime ụlọ na pan pan ma ọ bụrụ na ịchọghị ịkụ anụ ọkụ.
Gbasara : Otu esi eme Pizza n’elu igwe nri n’ime nkeji ise ma obu obere
41. Achịcha Shortcake Cupcakes
Gịnị mere ị ga-eji họrọ nke abụọ desserts kachasị amasị gị? Ntụziaka a dị mfe na-enye gị ụwa kachasị mma. Ana m asị gị nnọọ.
42. Nkeji 15 Buffalo Chicken sliders
.B. buru aru Omuma America. (Onweghi onye kwesiri ima ya ọkụkọ rotisserie na ịzụrụ-atụ Buffalo ihendori.)
43. Achịcha Nri Angel na Mixed Berry
Ọ bụghị achicha ọ bụla chọrọ ọtụtụ akwa na ikpo nke buttercream frosting. A na-enye ọgwụgwọ a na-enye ọkụ ọkụ na ọtụtụ mkpụrụ osisi ọhụrụ na ude mmiri.
Njikọ: 50 Kacha icioustọ, Itu Ikuku Ice Ude achicha Recipes
ubi kacha mma n’uwa
44. Cheater’s Prosciutto Hawaiian Pizza
Kweta nke a na-enwu gbaa, grilled flatbread dị ka ihe ọzọ maka ndị burgers na nkịta dị ọkụ . (Nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji iberi ma daashi a painiapulu , BTW ...)
Nweta Ezi ntụziaka
45. Obere Ufa-Osi Osi nri
Otu oge okpomọkụ dị mkpa, na-abịa ozugbo. Otu paụnd nke agwa mmiri na-eme ka ọ dị nro, na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ mgbe awa isii gasịrị na Crock-Pot. Emela ihere na agba aja aja.
46. ​​Karọt Roara Acha
Echefu esi carrots ruo mgbe ha na-bland na juu. Site ugbu a gaa n'ihu, ịmịcha ha bụ naanị usoro ị ga-achọ.
47. Thai Turkey Burgers
Gbanwee kpochapụwo burger na chiiz maka patty Thai a sitere n'ike mmụọ nsọ nke ejiri kabeji-karọt slaw.
48. Mint Chocolate Mgbawa Yogọt Ice Pop
Mint chocolate chip ice cream hụrụ, ọ rejoiceụ. Ldị Mkpụrụ Obi a na-enwu gbaa bụ ihe ụtọ ụtọ zuru oke ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ.
49. Champagne Donuts
Nne nke ezumike nile dessess, umu aka ndia ka esi ya oku n’ime oku — anaghi eghe ya. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị akpọ oku maka ememme, anyị agaghị ama ihe na-eme.
50. Mini Mason ite Apple Pies
Emecha nri abalị na kpochapụwo American eji megharịa ọnụ. Akụkụ nke ọ bụla bụ ọnụego kwesịrị ekwesị, na nkwakọ ngwaahịa ite a bụ nke na-egbu egbu karịa nri achịcha mara mma.
Jerrelle Guy / Rodney Scott''s ofwa nke BBQ
51. Azụ Mmanụ a -ụ-Butter Rodney Scott
Were eriri gị, azụ, azụ ọbara ọbara ma ọ bụ branzino. N'agbanyeghị azụ ị họrọ, ọ ga-atọ ụtọ * ịkwa emo * nke kpuchitere na ọgịrịga na-atọ ụtọ na mmanụ a honeyụ na mmanụ a homụ.
MELLISSA SEVIGNY / SQUEAKY dị ọcha KETO
52. Ihe niile nku nku okuko
Ihe ato + otu elekere = a ìgwè mmadụ-ụtọ ngwa onye ọ bụla nọ na cookout nwere ike ịla azụ. Enwere ike iji ụlọ ahịa zụrụ ihe niile ịzụrụ ụtọ kama ịme nke gị.
53. Akwukwo Yogurt Chicken Salad tinyere Ose
Ihe niile na-atọ gị ụtọ, bụ́ mmanụ ụtọ na-atọ ụtọ. N'ebe a, anyị na-adabere na yogọt Greek, Mọstad Mọstad na osikapa mmanya kama.
54. Ube oyibo na Black Bean Pasta Salad
Ọtọ n'oge okpomọkụ ọka. Buttery ube oyibo. Obi nwa agwa . Allllll ihe ohuru ohuru ohuru na cilantro. Anyị kwesịrị ikwu ọzọ?
Esteban Castillo / Chicano Rie
55. Oporo na Garlic Sauce
BRB, mmiri mmiri n'isi-mbụ n'ime ọdọ mmiri nke butter butter butter. Tinye a tree nke ndị a na tebụl ka onye ọ bụla nosh on mgbe ị gụsịa steaks na ibe n'ibe .
56. Ejiri Peach na Halloumi Salad na-eji ejiji Lemọn-Pesto
Ekwu okwu banyere a pụtara centerpiece. Otu anya na akara ngosi kwesịrị ekwesị na piich na halloumi cheese, na ndị ọbịa gị ga-agba ọsọ n’elu nkà gị.
57. Ọka Fritter Caprese nwere piich na Tomato
Nri a enweghị ike ịnweta oge ọ bụla karị ma ọ bụrụ na anyị nwaa. Kpee ọka fritt na ọka na obere skallion n'okpuru mpekere ohuru mozzarella, tomato okpuru na basil.
58. Rodney Scott si Pimento Chiiz
Maka ndị na-amaghị akwụkwọ, ụtọ mbụ gị na pimento cheese ga-eme ka uche gị daa. Ekwula na anyị adọghị gị aka na ntị.
59. Pink Lemonade Ogwe
Ihe ọ drinkụ officialụ nke oge ezumike nke Summer n'ụdị eji megharịa ọnụ. Ihe nzuzo ha mara mma pink hue, ị na-ajụ? Ọhụrụ raspberry purée.
© JOANN PAI / N’ THELỌ NCHE
60. Strawberries na Krème
Mgbe enwere obi abụọ, ịnweghị ike ịgahie oge ọkọchị na-arụpụta na pịa ude. Jikọta ya na obere achịcha ma ọ bụ achicha paụnd.
Njikọ: 32 nke kachasị mma nke ọnwa anọ nke ọnwa anọ iji jee ozi
Maka ọbụna ezigbo usoro nri, lelee akwụkwọ nri mbụ anyị, Naanị Ezi Ihe .
Qoute banyere inye ndi nwanyi ikike
obere Ezi ntụziaka maka snacks
isi omume n'ụlọ